warkii.com » Goormee ayaa Salaada ugu horeyso lagu tukan doonaa Masjidka Aya Sophia?
Goormee ayaa Salaada ugu horeyso lagu tukan doonaa Masjidka Aya Sophia?
Sidaan horay idiin kula wadaagnayba Aya Sophia ayaa dib markale looga dhigay Masjid kadin markii ay mudo kudhaw 90 sano Matxaf aheyd waxaana go’aankaas gaartay Maxkamada sare ee Turkiga.
Hadaba Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo saxaafada la hadlay kadib ku dhawaaqistii go’aanka Maxkamada ayaa sheegay in qorshaha uu yahay 24ta bishaan July oo ku beegan maalin jimce ah in Masjidka Aya Sophia la furo sidoo kalana lagu tukado Salaadii ugu horeysay ee Jamaaco mudo dheer kadib.
Waxay taariikhdaan ku beegantahay labo isbuuc kadib ayadoona hal jimce kaliya inaga xigto inaan goob joog u ahaano maalin kale oo taariikhi ah taasoo markii ugu horeysay mudo 86 sano kadib salaad Jamaaco lagu tukan doono Masjidka Aya Sophia.
Sidoo kale kadib go’aankii Maxkamada ee maanta waxaa markii ugu horeysay mudo 86 sano kadib laga adimay Masjidka Aya Sophia ayadoona uu madaxweynaha Turkiga Alle uga mahadceliyay inuu noqday qofka go’aankaas soo saaray.